ISBAR-BARDHIG: Halkan Ka AKHRISO Xogta Isbar-Bardhiga Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Ee Waxqabadkoodii Kahor Da’da 32 Jirka, Midkee Waxqabad Wanaagsanaa? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 25, 2019 at 05:49 ISBAR-BARDHIG: Halkan Ka AKHRISO Xogta Isbar-Bardhiga Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Ee Waxqabadkoodii Kahor Da’da 32 Jirka, Midkee Waxqabad Wanaagsanaa?2019-06-25T05:49:56+01:00 CAYAARAHA
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa shalay noqday da’da 32 ka waxaana ay taasi ka dhigantahay in xiddigani uu kusii dhawaanayo sanadihiisii ugu dambeeyay ee heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta.
Marka la qiimeeyo bandhigyadiisii xilli ciyaareedkii hore waxa muuqata in Messi ay wali ku jiraan waxbadan oo uu soo bandhigo kaddib markii uu 70 gool si layaab leh uga qayb qaatay (51 gool & 19 caawimo 49 ciyaarood gudahood).
Sidoo kale shaqsiga uu tartanka weyni kala dhexeeyo Messi ee Cristiano Ronaldo oo bishii Febrarury 34 jirsaday ayaa isaguna dunida usoo muujiyay sida ay da’du kaliya u tahay tiro.
Ronaldo ayaa soo caddeeyay inuu wali yahay mid kamida kuwa ugu wanaagsan qaarada Yurub waxaana uu xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee horyaaalka Serie A iyo kooxda Juventus kusoo guuleystay abaalmarinta xiddiga ugu qiimaha badan horyaalka.
Haddaba, Kaddib in Messi uu soo gaadhay da’da 32-ka, Waxaanu halkan idiinku soo bandhigi doonaa waxqabadka xiddigahan ee koobabka iyo xogta shaqsiga ahba leh ee ay soo gaadheen kahor da’daas.
Aan ku horraynee Ronaldo oo 5-tii Ferbaury 2017 32 jirsaday ayaa wakhtigaas ciyaaray 802 kulan isaga oo soo dhaliyay 568 isla markaana soo caawiyay 215 gool guud ahaan.
Ronaldo ayaa wakhtigaas kusoo guuleystay 22 koob wadar ahaan waxaana uu soo hantay abaalmarinta Ballon d’Or afar jeer isaga oo sidoo kale noqday xiddiga ugu fiican UEFA saddex jeer.
Dhinaca kale Messi ayaa da’dan kusoo ciyaaray 820 kulan isaga oo soo dhaliyay 671 gool isla markaana soo caawiyay 285 gool.
Messi ayaa dhinaca koobabka da’dan ku gaadhay 34 koob waxaana uu afar jeer kusoo guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or.
Messi v Ronaldo on their 32nd birthdays…
– 820 games
– 671 goals
– 285 assists
– 34 trophies
– 4 Champions Leagues
– 5 Ballon d’Ors
– 802 games
– 568 goals
– 215 assists
– 22 trophies
– 3 Champions Leagues
– 4 Ballon d’Ors pic.twitter.com/r57mZCpVPH
— SNM (@JackCook95) June 24, 2019
« Legal Drafting Workshop sparks exciting discussions in Garowe
BAHDILAAD: Neymar JR Oo Bahdilaad Ka Aqbalay Kooxda Uu U Waalanayo Inuu Ku Laabto Ee Barcelona & Go’aankan Sumcadiisa Dilaya Oo Uu Samayn Doono »